Ukusonga Ubuso beMask Factory | KwiChina Abavelisi beMask yokuSonga ubuso, abaXhasi
I-FFP3 Mask 6-Layer Respirator, iMask efihliweyo yokufihla imaski okhuselo iimaski ezili-10
Iimaski zethu zothuli ze-ffp3 kunye nezinto zokuphefumla ze-ffp3 zibonisa inkqubo yeefilitha ezi-6 ezinokucoca uluthuli / ukungcola emoyeni ukukhusela abantu abadala. Esi sihluzi se-FFP3 sikwathobela umgangatho we-EN149 waseYurophu: 2001 + A1: 2009. kwaye imaski yokuphefumla yokuwelda ye-ffp3 inemilo ebunjiweyo. Isivingco sokuphefumla kunye nolwakhiwo lwenkxaso yokuphucula amava okunxiba kwaye bunokunciphisa ngokufanelekileyo ubushushu benyama kunye nokufuma okubangelwa kukunxiba imaski ixesha elide.
3m Ubuso beMaski Ffp3 3m 9332 Ffp3 Ubuso beMaski 3m yeNdebe yobuso beMaski
I-Ffp3 Mask N95 kunye neMask yokuhlinzwa ye-N95 yoKhuseleko kunye nempilo ye-95% yokusebenza ngokuhluza. Ngaba ukukhusela eluthulini, imoto zeemoto, umungu, njl Kwaye uyilo Lightweight, Adjustable ngeempumlo Clip, imitya Elastic, i N95 Ukhuseleko Mask ukwenza itywina ekhuselekileyo ukhuseleko ubuninzi.
I-95mask yeNdebe yeMilo yeMaski ngaphandle kweValve ngokulahlwayo i-Ffp3 Respirator Dust Mask
Adjustable ngokulahla FFP2 ubuso imaski kunye vana
I-n95 ffp2 imaski yobuso lishishini elikhokelela kwizixhobo zokuphefumla ezikhuselekileyo ezine-5 layered protection eyenzelwe ukuthintela amathontsi, izifo ezinobungozi ezinjengeentsholongwane kunye neebhaktiriya, ungcoliseko, umungu, uthuli kunye nezicaphukisi ezingena ngaphakathi ebusweni. Isithambisi sokuphefumla ffp2 buso busebenza kakuhle kwaye iingxelo zelebhu zibonisa ukuba icoca i-95% yamasuntswana amakhulu kune-0.3 microns. I-Theffp2 imaski yokuphefumla yimodeli ye-3D kwaye iza neklip yeempumlo ehlengahlengisiweyo kunye ne-tubular super soft elastic band band welding ekunikezeleni ngobuso obusondeleyo.
Izinto ezilahlwayo ze-Earloop ezinokuphinda zisongeke kwaye ziphefumle iimaski zobuso zeFFP2
ffp2 imask emnyama 5-layer yokhuseleko, isebenza ngakumbi kunesiqhelo iimaleko ezi-3 ezilahlwayo. Iimaski zentsimbi ye-FFP2 kunye ne-ffp2 yezonyango ukukhusela uthuli, umungu kunye namanye amasuntswana aqinileyo. Umaleko wangaphakathi omnyama we-ffp2 wemaski wenziwe ngezinto ezingacaphukisi kulusu. Ungasebenzisa imaski yobuso be-ffp2 eofisini, ibhasi, indlela engaphantsi, uthutho lukawonkewonke. Kufanelekile ukuba abantu basebenze kwindawo enabantu abaninzi okanye abafuna ukufumana indawo ephefumlelweyo yokuphefumla ukuze bayisebenzise.